Muong Thanh Mui Ne Ihhotela 4 * (Phan Thiet, Vietnam): incazelo ehhotela, izilinganiso
Uma ufuna ukuthola Asia futhi libe yindawo yokungcebeleka iholide abakhethiwe Phan Thiet (Vietnam), Muong Thanh Mui Ne Ihhotela 4 * kungenzeka ngawe ukuthola indawo efanelekayo yokubeka ukuhlala ukhululekile ogwini.
Ihhotela Muong Thanh Mui Ne kwimephu, ungakwazi ukuthola kalula kule esempumalanga ebhishi of Mui Ne, eduze nedolobha. Ibanga kuya Phan Thiet ingamakhilomitha angu-16. Ukuze sifinyelele lapha, ungathatha itekisi noma ukuqasha imoto noma isithuthuthu. Eduze ehhotela kukhona imigoqo, amathilomu, izindawo zokudla, izitolo, ezidayisa izinto eziyisikhumbuzo. Ngokusho izivakashi, lapha izintengo zonke kancane kuka maphakathi Mui Ne, okuyinto inzuzo ka indawo ehhotela. Ngokuphathelene ukusondela ukuba port lomoya, Nha Trang sezindiza Cam Ranh itholakala 189 kilometers (drive cishe amahora amane ') kanye airport Ho Chi Minh City (Saigon) kususwe 210 amakhilomitha kude Mui Ne (mayelana ezinhlanu amahora ukushayela).
Ihhotela Okubukwe lakhiwa ngo-2014. Ihlanganisa indawo nje phezu ayizinkulungwane 10 square metres. Kunezinto eziningi ezinohlaza, amasundu izimbali, zikhona amabhuloho olunothile, waterfall.
Amahhotela Ezezindlu Isikhwama ethulwa yokuhlala ukhululekile 154, etholakala isakhiwo esinezitezi ezingu-eziyisikhombisa. Zonke amafulethi isici ifenisha yesimanje futhi ukhululekile, flat screen TV neziteshi ikhebula, air conditioning, ngocingo, itiye isethi, ephephile, yokugezela, umshini wokomisa izinwele. Izivakashi nazo babe ukusetshenziswa khulula Wi-Fi kumagumbi wabo futhi lonke ihhotela.
Ihhotela inikeza enkulu ekuqaleni yakhelwe yokubhukuda nge Jacuzzi futhi ilanga ithala, indawo yokudlela, Amabha amabili, ikamelo ukuqina, yokupaka, service izingubo, exchange, inkomfa izikhungo, ukuvakasha edeskini nokunye okuningi.
Traveller Izibuyekezo Ihhotela
Kusukela ehhotela izivakashi ngesikhathi holidi angaphandle iba umuzi wesibili, kubaluleke kakhulu ukuba sibe iphutha ngokukhetha akwenza. Ngakho-ke, ezimweni eziningi, abantu abenza uhlela uhambo, qala kahle ngaphambi kokuhamba ukufunda ulwazi mayelana amahhotela yezwe bazobambisana vakashela. Ukunakekela okukhethekile abahambi wazibonela belulekwa ukuba ufunde izibuyekezo izakhamuzi yangaphambili yakithi. Ngempela, emazwini abo, zichaza kochwepheshe yangempela nezingozi ehhotela ethize kukusiza uqonde, ukulingana yona mathupha, noma kufanele uthole okunye. Namuhla sinikela ukunakwa wakho bazoxoxa Izibuyekezo generalized zezivakashi Russian mayelana ehhotela Muong Thanh Mui Ne Ihhotela 4 * (Vietnam, Phan Thiet). Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi leli hhotela okufanelekelayo kakhulu Isilinganiso kusekelwe izilinganiso izivakashi. Ngakho, kuba 4.3 amaphuzu aphume a kungenzeka ezinhlanu. Lokhu kusikisela ukuthi abahambi abaye bavakashela lapha kakhulu aneliseke izimo zokuphila kanye nekhwalithi yesevisi.
Ukwahlulela ngokubukeka ukubuyekezwa bakithi, amafulethi ehhotela ezibhekwa kakhulu kubo. Ngakho bathi: amakamelo kukhona ivulekile kakhulu, Tastefully ehlotshisiwe, elikhanyayo futhi zikhululekile. Izivakashi babo bazizwe besekhaya. Ifenisha efulethini kuyinto Imishini emisha futhi ukhululekile, futhi zesimanje. Konke usebenza kahle. Njengoba for indawo egumbini, akusikho ukuthi abahambi belulekwa ukuthi kungenzeka ukuba abe matasa kuwo kuleyo sibe nombono ulwandle. Futhi, emazwini abo, hhayi kuphela ithuba lokujabulela amanzi amahle aluhlaza. Ngakho-ke, amanye amawindi efulethini ebhekene emgwaqweni, umsindo okungase kancane ukugxambukela niphumula. Ngakho-ke, uma unezingane ezincane, noma uma ubuthongo ebucayi kakhulu, kungcono ixazululwe in the amafulethi elibheke olwandle. Ngokuqondene nazo zonke ezinye, ngokuvumelana iholide-abenzi, kungabikhona izimangalo emakamelweni ehhotela Muong Thanh Mui Ne Ihhotela 4 * bengamlaleli.
Azikho izimangalo ukuba izintombi zasemizini ngayo kithi kusuka iholidi baye lapho bezwe kwethu nabo wayengekho. Ngokusho kwabo, amakamelo ayahlanzwa njalo futhi ephumelelayo. Futhi, njengoba kudingeka, nezincekukazi restock inhlanzeko yomuntu siqu egumbini lokugezela, okuqukethwe ibha mini futhi alethe amanzi ebhodleleni. Umbhede lelineni amathawula washintsha izikhathi eziningana ngesonto.
Uthole Izibuyekezo omuhle nezinye izisebenzi Muong Thanh Mui Ne Ihhotela 4 * (Phan Thiet, Vietnam). Ngakho, izivakashi bathi abasebenzi hhotela enobungane njalo, ekwamukeleni, beshesha, ahlale evule amehlo, ujabule ukuze sifeze noma isiphi isicelo futhi alungele ukuphendula noma imiphi imibuzo bese ukusiza ukuxazulula isimo. Ezinye izisebenzi lapha ukuqonda ngesiRashiya, kodwa ikakhulu ukuxhumana abasebenzi kuyoba ngesiNgisi.
Ngaphansi lento, abahambi, nahlulele ngezimpendulo zabo, akazange abeke phambili kunoma ikuphi ukumangalelwa libhekelele ehhotela. Ngakho, bathi wayethanda ibhulakufesi. Yiqiniso, ngeke sikwazi ukusho ukuthi nsuku zonke base ahlukahlukene, kodwa ukukhetha obanele izitsha kanye nemikhiqizo kwenza ukuba angadli eyodwa futhi into efanayo njalo. Ngakho, ekuseni, izivakashi yehhotela nethuba ukudla isobho, noodle, inyama izitsha, ehla, isaladi, imifino, izithelo, okusanhlamvu, ujusi, itiye, ikhofi.
Emini izivakashi uthanda ukudla cafe, etholakala eduze ehhotela. Ngokusho kwabo, kukhona ukulungele cishe njalo enhle kakhulu, futhi abahambi nethuba bazitike ngokwakho nge kodwa futhi cuisine hhayi kuphela wendawo European futhi Russian.
Ihhotela Muong Thanh Mui Ne 4 * akazange ukudanisa izivakashi zayo, futhi leli phuzu. Ngakho, izivakashi ezihambele izimpendulo zabo wabonisa ukuthi sebanelisekile kakhulu nge lolwandle iholide lapha. Kusukela izakhiwo zokuhlala lapho waya olwandle engafinyelelwa ngemizuzu embalwa nje, ijubane unhurried. Ingabe uhlale lapha ukhululekile lounge izihlalo kanye ilanga izambulela. Beach lapha sandy, ihlanzekile. Sunset emanzini angajulile. Nokho, abanye abahambi bexwayisa isidingo baqaphelisise, njengoba kukhona ingozi ibhomu sea urchin. Ezimweni ezinjalo azisenzeki njalo, kodwa namanje baqaphe. Ngokuqondene nemiphumela ethile engathandeki, inani izivakashi, ikakhulukazi labo abaye lapha ngamaholide kaKhisimusi, wakhononda ngomsebenzi yokuthi nezihlalo emphemeni ogwini kubo bonke comers akwanele. Nokho, kwenzeka hhayi ngenxa ilanga loungers kancane, kodwa ngoba izivakashi uzithatha ekuseni (ngokoqobo ngesikhathi 6 am), bese ulwandle ngesikhathi engcono eyodla. Kodwa lapho ihhotela akuyona egcwele, lobu bunzima musa kuphakama.
Ihhotela "Asteria", Petersburg: incazelo, amanani, ukubuyekezwa
Indlela yokukhetha amahhotela amahle kunawo wonke eGreece ukuze uthole iholidi elinomntwana? Ukukhetha okuthakazelisayo kwamahhotela
Lazarevskoye ehhotela "Surf": Izibuyekezo
Festival Shedwan Golden Beach Resort Indawo abantu 3. Ihhotela Izibuyekezo Shedwan Golden Beach Resort
Kuyini cap sowesifazane sangasese
Cardio Atherosclerotic: ukuxakeka. Cardiosclerosis: Ukwelashwa, Izimpawu, Izimbangela
Kuyini injini yokusesha? Ukucinga Injini ye-Google
Cap umuthi: emihle nemibi. izinhlobo izinto zokuvimbela inzalo
Indlela kabusha izithombo zibe utamatisi inhlabathi
Smartphone "Lenovo A6000": ukubuyekezwa, ukubuyekeza, Ukucaciswa
Pavel Chernyshev - okufanayo "inkanyezi umfana"
Oats: Izimo, ayelapha futhi ewusizo
Umuthi 'Larkspur "(" impilo laseSiberia "), ukwakheka kanye nokusetshenziswa
BCAA Ultimate Nutrition Ezemidlalo Nutrition 12000: indlela yokwenza?
Kungani ubuhlungu esiswini ekuseni: Izimbangela Nemiphumela